मुख धुँदा यी ५ ग´ल्ती गर्नुहुन्छ ? आउनसक्छ डण्डीफोर र दाग – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/मुख धुँदा यी ५ ग´ल्ती गर्नुहुन्छ ? आउनसक्छ डण्डीफोर र दाग
त्यसपछि हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीको मूख्य अङ्ग ‘सेतो रक्तकोष’ले ती सबै सङ्क्रमित कोषहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर डण्डिफोरको रूपमा बाहिर पठाउने गर्दछ।भनेपछि यसको मूल कारण के रहेछ त भन्दा, हाम्रो छालामा भएका स-साना प्वालहरू टाल्लिनु। अनि हामीले मुख धुँदा विचार पुर्याएनौँ भने यो समस्यामा झन् झन् वृद्धि हुँदै जान्छ।
गल्तीः राति सुत्दा हाम्रो हत्केलामा अनेकौँ प्रकारले फोहोर टाँस्सिन्छन्। अनि दिउँसो भरि यताउता काम गर्दा पनि हातमा फोहोर लागेको हुन्छ।त्यसपछि अनुहार धुने बेलामा हातले सिधै अनुहारलाई छुने गल्ती गर्छौँ। यसो गर्दा हत्केलामा टाँस्सिएका फोहोर र ब्याक्टेरिया अनुहारमा सर्दछ र झन् बरबाद हुन जान्छ। गर्ने के तः त्यसैले एकैचोटि अनुहार पखाल्नुभन्दा पहिला हातलाई राम्रोसँग पखाल्नुहोस् अनि बल्ल अनुहार सफा गर्न लाग्नुहोस्।
गल्तीः ठीकै छ ल, मुख धुँदा सबै विधि पुर्याएर धुनुभयो, अब तपाईँले गर्ने गल्ती भनेको के हो थाहा छ ? फोहोर तौलियाले अनुहार पुछ्ने !बरु नपुछ्नुस्, त्यत्तिकै सुक्न दिनुस्, तर फोहोर लुगाले पुछ्ने काम नगर्नुहोस्। ल त्यो पनि ठीकै छ, तौलिया सफा नै छ, अब अधिकांशले के गर्छन् भन्दा तौलियाले जथाभावी अनुहारमा रगड्न थाल्छन्। के सिसा पुछेको हो र ? गर्ने के तः अनुहार भनेको तपाईँको सुन्दरता अनि व्यक्तित्वको पहिचान गराउने महत्वपूर्ण अङ्ग हो। त्यसैले यसको विशेष ख्याल गर्नुपर्दछ। सफा तौलियाले हलुकासँग नरगडि पुछ्नुपर्दछ।
गल्तीः विशेष गरी जाडो मौसममा मानिसहरू चिसो पानी छुन डराउँछन्। अनि नुहाउँदा, मुख धुँदा तातो-मनतातो पानीको प्रयोग गर्छन्।तर उनीहरूले यो विचार गर्दैनन् कि, तातो पानीले अनुहारको चिल्लोपना हटाउँदछ र राम्रा ब्याक्टेरियाहरूलाई नष्ट गरिदिन्छ, जसले गर्दा अनुहार फुस्रो हुने, एलर्जी हुने हुन्छ। गर्ने के तः सकेसम्म चिसो अनि सफा पानीले नै अनुहार पखाल्नु आवश्यक हुन्छ। यदि अत्ति नै जाडो भएमा धेरै तातो होइन, हलुका मनतातो बनाएर धुनुपर्दछ।